युरोप अमेरिकाको झल्को दिने कलंकी-कोटेश्वर सडक, हेर्नुहोस् १६ फोटो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
युरोप अमेरिकाको झल्को दिने कलंकी-कोटेश्वर सडक, हेर्नुहोस् १६ फोटो
काठमाडौँ। विकास निर्माणको एक उदाहरणीय काम बनेको छ कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्ड। अहिले यो सडकखण्डले गर्न चाहे के चाही असम्भव छ र भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरेको छ। निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा धमाधम मार्किङको काम भइरहेको छ।
हाल सानेपा देखि एकान्तकुनासम्मको सडकमा मार्किङको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। जसले गर्दा सडकहरु निकै सफा र आकर्षित देखिएका छन्। झट्ट हेर्दा विकसित देशहरुमा निर्माण भएका सडकहरुको झझल्को दिन्छ यो सडकले।
झण्डै दश लेनको यस सकडमा बीचमा सेतो र दायाँबायाँ पहेँलो रंगले मार्किङ गरिएको छ। बेलुका देखिने दृश्यले पनि निकै मोहित बनाउँछ यस सडकले। यस्तै कोटेश्वर–कलङ्की सडक खण्डकमा दोस्रो तहको कालोपत्रको काम समेत अघि बढेको छ।
केही दिनभित्रैमा ग्वार्कोबाट कोटेश्वरतर्फको कालोपत्र अघि बढ्नेछ। दुई तहको कालोपत्र सकिएपछि सडक चिन्हको काम हुनेछ। कलङ्कीबाट ग्वार्कोसम्म दोस्रो तहको कालोपत्र भइरहेको छ।
आगामी पुसको दोस्रो साताभित्रैमा सडक निर्माणको सम्पूर्ण कामसक्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको यस योजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर निरञ्जन शर्मा अर्यालले बताए।
नेपाल सरकारले यस खण्डमा सातवटा आकाशे पुल र आठ लेन सडकको दुवैतर्फ एकएक ‘लेन’ को सेवा मार्ग (सर्भिस ट्र्याक) निर्माण गरिरहेको छ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी साङ्घाई निर्माण सेवा समूहले यो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको छ। सडक निर्माणमा समन्वयको काम काठमाडौँ चक्रपथ सडक योजनाले गरिरहेको छ।
यो सडकलाई ‘अण्डर पास’ निर्माण र दश लेनको सडकका हिसाबले नेपालमै पहिलो सडक मानिएको छ। झण्डै चार वर्ष पहिले निर्माण कार्य शुरु भएकामा विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा एक वर्ष लम्बिएको थियो। १० दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको कलङ्की कोटेश्वर सडकको कूल लागत तीन सय १२ मिलियन युआन छ।